I-Olima Dayz Hack 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Olima Dayz likaHack yilelo elaligqokwe
Nge-DayZ Olima Hack yethu, unganqoba zombies nabadlali!
Thola ukufinyelela kuma-hacks amahle kakhulu imali engayithenga, khona lapha! Thenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1 namuhla!
I-Gamepron ingumhlinzeki oholayo we-DayZ Hacks online ngesizathu - Thenga ukhiye womkhiqizo weviki eli-1 namuhla!
Ungathola ukufinyelela okude kakhulu uma ukhetha ukwenza kanjalo! Thenga ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1 namuhla!
IDayZ izokujikijela kakhulu, okungabonakala kukhungathekisa kubadlali abasha. Noma ngabe umusha kulo mdlalo noma udinga nje “umfutho” omncane, ungathembela ku-DayZ Olima Hack yethu ukuletha! Thola usizo oludingayo ku-GamePron.
Ukwaziswa likaHack yilelo elaligqokwe Dayz Olima
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi i-Virtualization kufanele ube nayo uma ufuna ukusebenzisa inguqulo ye-Olima yama-hacks ethu, ngisho nama-Dayz Cheats ethu. Ukusebenzisa kwethu iDayZ Olima Hack kuyindlela ephelele yokuthola izandla zakho kuma-cheats angeke aqede ama-FPS akho, njengoba kungewona wonke umuntu osebenza nekhompyutha enamandla yokudlala imidlalo. Uma unekhompyutha “ebuthakathaka” ngandlela thile noma ufuna nje ukuthola ama-FPS aphakeme kakhulu, ukusebenzisa i-DayZ Olima Hack yethu kuzosebenza izimanga! Ungawethula umdlalo ku-Steam noma u-Stand Alone bese usebenzisa i-DayZ Hack yethu.
I-DayZ Wallhack yethu inikela nge-Enemy ne-Item ESP, kanye nemininingwane ye-ESP (njenge-Distance, Skeleton, Clothing, Weapons, Ammo, Food, and Medicine). IDayZ Aimbot nayo iyamangalisa futhi inezinketho eziningi ongakhetha kuzo, njenge-Bone Prioritization kanye ne-Adjustable FOV Circle. Bona inqubekela phambili ngeGamepron!
Imininingwane Yesitha (Ibanga, iZombies, indawo)
Into ESP (Ibanga, Izembatho, Izikhali, i-Ammo, Ukudla, Ezokwelapha, Amatende, Imiphongolo)
I-Aimbot (Ibanga, Ukhiye, Ithambo)
I-DayZ Olima Hack yethu ingcono kakhulu kunamanye ama-DayZ Hacks emakethe njengamanje, futhi lokho kungenxa yawo wonke umsebenzi esiwufakile. Besifuna ukuqinisekisa ukuthi le nkohliso ibilula futhi iqondile kubo bonke abasebenzisi bethu be-novice, ngakho-ke kulula kakhulu ukuyisebenzisa - ungasakaza futhi ngenkathi le hack inikwe amandla, njengoba ababukeli bakho bengeke bakwazi ukubona ukuphamba kunikwe amandla. I-DayZ Hack ingaphandle futhi uzodinga ukukhubaza ukuvikelwa ukuze uyisebenzise, ​​ngaphandle kwalokho ifulegi lamanga lingavimbela ithuluzi ukuthi lisebenze.
Kungani usebenzisa uDayz Olima ngaphezu kwabanye abahlinzeki?
Akukho ukufana nekhwalithi etholakala lapha eGamepron, yingakho abasebenzisi bethu bengeke babheke kwenye indawo ngezidingo zabo ze-DayZ Hack. Lapho uzame ithuluzi lethu futhi uqonda uhlobo lwekhwalithi okufanele sinikele ngayo, asikho isizathu sokuthi kungani ungafuna ukubheka kwenye indawo! Ungadlala ngisho ne-DayZ kusikrini esigcwele nge-DayZ Olima Hack yethu eyenziwe yasebenza, abahlinzeki abaningi abakwazi ukuziletha bona. Ama-akhawunti akho ahlala ephephile lapho usebenza nama-hacks avela ku-Gamepron, njengoba konke ukuphamba kwethu kungatholakali futhi kuzokusiza ukuthi ugweme ukuvinjelwa cishe ngaso sonke isikhathi.
Sebenzisa imenyu yethu enembile yemidlalo ukwenza izinguquko ongathanda ukuzibona kakhulu! Akudingeki ukuthi ulungiselele izilungiselelo zesitoko esinazo zeDayZ Olima Hack yethu, njengoba ungazithathela izinto ezandleni zakho - ukusebenzisa imenyu engaphakathi komdlalo ikuvumela ukuthi wenze ukulungiswa kwempukane kuyo yonke iDayZ yethu Izici zeHack yilelo elaligqokwe. Ungashintsha ukuthi i-Aimbot izokhomba ngokushesha kangakanani izitha, noma ngisho nokushintsha nje ukuthi yiziphi izinketho ze-ESP ozozibona esikrinini sakho. Inani lezinketho libonakala lingapheli, ngakho-ke dlala ngokuzungeza imenyu engaphakathi komdlalo bese uthola ukuxubana okuhle!
I-A6. Yebo, isekela imodi yesikrini esigcwele.
Onke amathuluzi ethu enzelwe ukuhlala engatholakali ngesikhathi sokusetshenziswa, ngakho-ke awusoze wakhathazeka ngokuvinjelwa. Ukuphepha kuyinto eza kuqala lapho ukhetha ukugenca nge-GamePron!
Phula isikhunta futhi ungene ku-DayZ ngendlela ehlakaniphile! Thenga ukhiye namuhla
Ilungele Yengamela noDayz Olima Hack wethu?